यी तिन जना झापालीले गरे यस्तो काम , पैसा कमाउने उनीहरुको आइडिया देखेर प्रहरी नै पर्यो चकित ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०६, २०७८ समय: १२:३३:४६
האביזר המדהים הזה לסמארטפונים כובש את ישראל בסערה!
झापाकी ३४ वर्षीया एलिजा बस्नेत, ४४ वर्षीय धन बहादुर सेन्चुरी र ३२ वर्षीय टेक बहादुर बस्नेत पोखरा पुगे । उनीहरु त्यहाँ १० वटा टेम्पू सहित पुगेका थिए । टेम्पुमा उनीहरुले माइक फिट गरेका थिए जसले पोखरा बजार घुमेर एक भावुक सन्देश दिन्थ्यो ।
त्यही सन्देशका आधारमा मानिसहरु धमाधम उनीहरुलाई पैसा दिन्थे । हुन त ट्याक्सी, मोटरसाइकल, कार र बसहरु गुड्ने सहर पोखरामा टेम्पु भने चल्दैनन् ।
यो साता भने पोखराका टोलटोलमा र चोकचोकमा टेम्पु देखिए । तिनले यात्रु भने ओसारेका थिएनन् । टेम्पुमा माइक जडान थियो । माइक बज्थ्यो र भन्थ्यो–पाल्पाका चुडाबहादुर रुचाल मिर्गौला पी डि त र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा उनका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोला ।
कहिले बैदाम, कहिले लेखनाथतिर त कहिले पोखराका गल्लीगल्लीमा त्यस्तो माइकिङ भइरहेको थियो । कति ठाउँका चोकहरुमा चाहिँ केही समय टेम्पु बिसाएरै घन्टौं वा दिनभरजसो आर्थिक सहयोगको अपिल पनि भइरहेको थियो । यस्तो दृश्यमा जब प्रहरी नजर प-यो, शंका लाग्यो ।
बुझ्दै जाँदा त्यसरी सहयोगको अनुरोध गर्नमात्रै पोखरा महानगरपालिकाभित्र १० वटा टेम्पु खटिएका रहेछन् भन्ने पत्ता लाग्यो । जे भनेर चन्दा संकलन गरिएको थियो, त्यसका लागि कतैबाट अनुमति लिएको प्रमाण पनि भेटिएन । इलाका प्रहरी कार्यालय शि शु वाका प्रमुख डिएसपी महेन्द्र मरासिनी नेतृत्वको टोलीले टेम्पुवाला पोखरा २६ विजयपुरस्थित न्यु हाइवे स्टाफ होटल एन्ड लजमा बस्ने गरेको भेटेको थियो । त्यहाँ त एक वा दुई होइन १० वटा टेम्पु भेटिए । तर बिरामी भनिएका ब्यक्ति नै नरहेको समेत पत्ता लाग्यो ।
मिर्गौला पी डि तका लागि भन्दै ठाउँठाउँमा चन्दा संकलन गर्ने उनीहरुको ध न्दा नै रहेको प्रहरीले पत्तो पायो । त्यसपछि कास्की प्रहरीले यसरी चन्दा संकलन गरिरहेको आरोपमा ३ जनालाई पक्रेको छ । झापा विर्तामोड नगरपालिका ९ की ३४ वर्षीया एलिजा बस्नेत, वडा नम्बर १ का ३२ का टेकबहादुर बस्नेत, झापाकै हल्दीबारी गाउँपालिका १ का ४४ वर्षे धनबहादुर सेन्चुरी पक्राउ परेका हुन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोसट् दैनिकमा छ ।
Last Updated on: August 22nd, 2021 at 12:33 pm